Edepụtala Iwu Akpụkpọk ọrịa Coronary | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraEdepụtala Iwu A Na-ahụ Maka Njehie Ọrịa
20 / 04 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, General, coronavirus, Isi akụkọ, OGBU NIILE, Turkey
E bipụtala iwu nke na - alụ ọgụ coronavirus
Iwu banyere Mbelata Mmetụta Ọhụrụ nke Coronavirus (Covid-7244) na Iwu Nke 19, nke gụnyere ụfọdụ usoro iji belata mmetụta ọjọọ nke ọrịa coronavirus na mpaghara akụ na ụba na nke mmekọrịta, na edepụtara ya na Official Gazette nke e dere na Eprel 17, 2020.
Iji hụ usoro ndị agbadoro na mpaghara akụ na ụba na mpaghara akụ na ụba site na Nkwupụta Iwu kwuru nke isiokwu na Iwu ahụ. Pịa ebe
Ihe omume na ọnọdụ nke CORONAVIRUS Ọhụụ (COVID-19) OUTBREAK
N'IWU EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO EGO
M GA-EME KA EGO NA-EGO
Iwu Mba. 7244 Anakwere: 16 / 4 / 2020
O yigharịrị, ịnata ma ọ bụ hazie ụfọdụ ihe nnata
IHE 1 - (1) Ọhụrụ coronaviruses (Nnọkọ ọnụ-19) maka ihe kpatara eji esite na ntiwa;
a) ego ị ga-akwụ n'ihe metụtara Akụ Akụ agaghị akwụ ụgwọ dịka nkwekọrịta; Land Grabbers ndị na-eri 1 / 4 / 2020 Onye ikike gburugburu Mịnịstrị na obodo mepere emepe ka enwere ikike ibugharị ihe dị mkpa ịnakọta maka ọnwa 3 site na ụbọchị atọ na-aga, na -achọghị itinye akwụkwọ. Onye Mịnịstrị gburugburu na Urbanization nke Mịnịstrị ahụ nwere ike ịgbatị oge ndị a ruo ọnwa 3. A na-anakọta ihe ndị a na obere nha kwa ọnwa ruo oge ncheta, na-enweghị mgbati oge ọ bụla ma ọ bụ ọmụrụ nwa.
b) Ewezuga ikike enyere maka ebumnuche njem njem 31 / 8 / 1956 Dabere na Iwu Iwu ụbọchị wee dị ọnụ ọgụgụ 6831, ikike enyere na nnọchite ezigbo ụlọ ọrụ iwu na nkeonwe dị n'ọhịa steeti na ebe a na-ere ozu na ndị na-akwụ ụgwọ ụlọ nke General Directorate nke Oke Osimiri dị na State Tender Law No. 8 e dere na ụbọchị 9/1983/2886, dị ka nke 1/4/2020 A ga-ebigharị ego iji kpokọta maka ọnwa kwa ọnwa ọnwa 3 na-enweghị mkpa maka ngwa. Anyere Minister nke Ugbo na Oke ohia igbatị oge ndị a ruo ọnwa atọ site na njedebe. A na-anakọta ndị na-anata ihe ndị a na njedebe oge enyere, na maka ịkwụ ụgwọ kwa ọnwa maka oge ebula, na-enweghị mgbati ma ọ bụ mmasị ọ bụla. Na mgbakwunye, ụlọ akụ nwere ike ịnweta akwụkwọ mmesi obi ike megide ụgwọ afọ mbụ enwetara n'oge oge iwere akwụkwọ ikike, ma enwere ike ibuga saịtị ahụ.
c) 9 / 8 / 1983 Site na mgbazinye ndị enyere dị ka usoro Iwu nke 2873 dị na ebe edebere Iwu National Parks nke edepụtara na 2886 ma gụọ 1, ego a ga-anakọta maka oge ọnwa 4 na-egbu oge maka ọnwa 2020 na-enweghị ntinye akwụkwọ ikike. Anyere Minister nke Ugbo na Oke ohia igbatị oge ndị a ruo ọnwa atọ site na njedebe. A na-anakọta ndị na-anata ihe ndị a na njedebe oge enyere, na maka ịkwụ ụgwọ kwa ọnwa maka oge ebula, na-enweghị mgbati ma ọ bụ mmasị ọ bụla.
Ahịa sitere na iwu dị mkpa gbasara ihe ma ọ bụ akụ nke obodo na-enweghị ike ibi, ọchịchị ime obodo, ndị isi mpaghara na ndị mmekọ ya na ndị otu nchịkwa mpaghara ha nọ na ya, Land Grabbers na ọnụego ma ọ bụ ego na-esite na mgbazinye ahụ, 19 / 3 / 2020 Onweghariri onwa abuo nke anakpokota rue onwa ato ga - amalite n ’ubochi nzuko omebe iwu n’obodo mepere emepe, n’ime aka oru, ndi isi oha nke ime obodo na ndi n’iile; N’ime ụlọ ọrụ ejikọtara ọnụ, a na-akwado ụlọ ọrụ mkpebi nwere ikike. Onye Mịnịstrị gburugburu na Urbanization ma ọ bụ onye Minista nke ime obodo nwere ike ịgbatị oge ndị a ruo ọnwa atọ. A na-anakọta ndị na-anabata ihe a na njedebe oge enyere, na maka ịkwụ ụgwọ kwa ọnwa maka oge ebula, na-enweghị mgbati ma ọ bụ mmasị ọ bụla. A naghị anakọta ego mgbazinye maka oge azụmahịa ndị kwụsịrị ihe omume ya ma ọ bụ enweghị ike ịrụ ọrụ anaghị arụ ọrụ.
d) taxtụ ụtụ isi nke obodo, obodo na ndị mmekọ ikayakke nkwupụta na usoro ịkwụ ụgwọ, yana ụgwọ nkwụnye ụgwọ mkpuchi mmekọrịta ọhaneze 3 / 7 / 1968 Akwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ kwa afọ nke a na-eme na General Directorate of State Hydraulic Works dị na edemede nke 1053 nke Iwu Nke 4 na iciplọ Ọrụ Ọchịchị Mịnịstrị Mịnịstrị na-ahụ maka ị ,ụ ihe ọ Usingụ andụ, iji na Industriallọ Ọrụ Egwuregwu maka ọnwa atọ gafee ọnwa atọ site na ụbọchị a batara. Onye isi ala nwere ike ịgbatị oge ndị a ruo ọnwa 3 site na njedebe. A na-anakọta ndị a na njedebe nke oge yigharịrị, na ntinye ego kwa ọnwa ruo mgbe ebigharịrị, na-enweghị mmụba ọ bụla ma ọ bụ mmasị. N'oge igbu oge 4 / 1 / 1961 Datebọchị na ntaramahụhụ oge nkwụ ụgwọ dị na Usoro Iwu ụtụ isi 213 na ọnụ ọgụgụ XNUMX anaghị arụ ọrụ ma na-agba ogologo oge ndị a anaghị arụ ọrụ.
e) Nnabata nke obodo, obodo na ụlọ ọrụ metụtara mmiri ị forụ mmiri maka ebe obibi na ebe ọrụ ndị amachibidoro ma ọ bụ nke a na-apụghị inyocha anabataghị ya nwere ike itinye akwụkwọ site n'aka ndị isi obodo ruo ọnwa atọ dịka ụbọchị nke mbido a. Ndị isi obodo nwere ike ịgbatị oge ndị a ruo ọnwa atọ site na njedebe. A na-anakọta ndị na-anata ihe ndị a na njedebe oge enyere, na maka ịkwụ ụgwọ kwa ọnwa maka oge ebula, na-enweghị mgbati ma ọ bụ mmasị ọ bụla.
f) Obodo na obodo, na mkpebi nke ndị omebe iwu, na-ejedebeghị na-egbochi ndị ọrụ ụgbọ njem ọha na-akwụsịbeghị na ndị ọrụ iwu na-arụ ọrụ site na ịnweta ikike ma ọ bụ akwụkwọ ikike ma ọ bụ ịgbazite ahịrị, ruo ọnwa 3; nwere ike ịkwụ ụgwọ nkwado ego, ikike ibinye oge, ikike, ụgwọ mgbazinye ahịrị kwekọrọ na oge akọwapụtara maka ọnwa 3 n'enweghị mmasị. Ekwadoro onye minista gburugburu ebe obibi na obodo ịbawanye oge ndị a ruo ọnwa atọ site na njedebe. A na-anakọta akwụkwọ ikike, ikike, ụgwọ mgbazinye na njedebe na njedebe oge enyere, na maka ịkwụ ụgwọ kwa ọnwa maka oge debere, na-enweghị mmụba ọ bụla ma ọ bụ mmasị.
g) Mkpesa mara kwa afọ na ụtụ ahịa mgbasa ozi na ụtụ ụlọ mmezi ụlọ ọrụ afọ ọ bụla nke ụlọ ọrụ ndị ha na-akwụsị ma ọ bụ enweghị ike anaghị arụ ọrụ, na-emetụta oge ọrụ ndị a na-akwụsị ma ọ bụ adịghị arụ ọrụ.
h) 16 / 8 / 1961 Ego ulo akwukwo gụrụ elu na ụlọ obibi Iwu nke 351 nke gbara ụbọchị iri na isii nke Tsgwọ mgbazinye ego na ntanetị nke ederede ga-eyigharị ọnwa 3 na-enweghị ọnọdụ ngwa, naanị maka ndị a ga-anakọta maka oge ọnwa atọ site na ụbọchị a batara. Onye isi ntorobịa na egwuregwu nwere ike ịgbatị oge ndị a ruo ọnwa 3 site na njedebe nke afọ. A na-anakọta ụgwọ ndị kwuru na njedebe nke oge yigharịrị, na ntinye ego kwa ọnwa dịka oge ezighara, na-enweghị mmụba ọ bụla, mmasị ma ọ bụ D-PPI.
h) Ndi otu ahia ha na ahia ha 1 / 6 / 2000 Nkwụghachi ụgwọ ụgwọ nke 4572 nke ụgwọ mgbazinye ego n'ihi Nkwado na Stkwụ Stkwụ na Nkwado Akwụ ụgwọ (DFIF), nke e degharịrịrịrị n’usoro edemede nke 4 nke Ọrụ Ndị Ọrụ Mgbata na Mmekọ Nke 2020 na-akwụ ụgwọ kwa afọ, na-ebigharịrị na 2021 na-enweghị mmasị, 2021 Ego yigharịrị nkeji ịkwụ ụgwọ n'ime afọ ndị na-eso, gụnyere afọ, ka eyigharịrị ruo otu afọ n’enweghị mmasị.
i) 14 / 9 / 1972 Njem akara ụbọchị 1618 ma gụọ mmadụ XNUMX Ụlọ ọrụ na Njem Ụlọ ọrụ Anaghị etinye ego otu afọ a na-achịkwa na Nkeji edemede 35 nke Iwu Union na 2020.
ii) Turkey Eletrik Nkesa Company (TEDAŞ) receivables ịda site na ọkụ eletrik na oriri (privatization n'oge nyefe usoro TEDAŞ ndị na-ebugharị ihe ewepụtara) na-ahazi usoro ndị a.
l) Duebọchị ruru 1 / 2 / 2020 Iwu n’iwezigharị ụfọdụ nkwuputa na iwu nke Nọmba 23 e dere ụbọchị 2/2017/6824 ma akwụbeghị ụgwọ dịka ụbọchị ntinye ike nke isiokwu a dịka ụbọchị (gụnyere ụbọchị a) nke Ruo ngwụsị nke Septemba 1, ihe nnabata niile nke ewepụtaghị aha dịka isiokwu na edemede nwa oge 2021. TEDAŞ ka ụlọ ọrụ nkesa / ndị na-ere ahịa na-ebufe, ma ọ bụ TEDAŞ nkeji mbu nke ego a ga-etinye ma kwụọ ya ede bụ na ị ga-akwụ ụgwọ n’ụbọchị ikpe azụ nke Ọktoba 2021 ma n’ọnọdụ kwụrụ ụgwọ a ga-akwụ ụgwọ nkeji atọ n ’otu ọnwa, ọ dabara na ego a na-akwụ ụgwọ ndị a. ngwa nke a gbahapụrụ nchịkọta. Ọ bụrụ n’ịkwụ ụgwọ dịka usoro nke usoro a dị, enweghị mmụba, mmụba ma ọ bụ ọnụọgụ nwere ike etinyere oge ndị a ka ọ ga-adịrịrị maka edemede a.
2) N'ihe banyere akwụkwọ ma ọ bụ usoro itinye aka n'ihe gbasara ndị nabatara ndị na-anata ihe ruru na paragraf a, nke A na-eme usoro dị ka akwụkwọ edemede (i), (j), (k), (l) na (m) nke paragraf mbụ nke edemede ahụ.
3) Banyere nnata nnabata niile dị na paragraf a, 1 / 2 / 2020 Oge mmebi dị na iwu dị mkpa site na ụbọchị Ọktọba ruo mgbe ụbọchị ikpe ikpeazụ nke Ọktọba 2023 anaghị arụ ọrụ.
4) Site na ndenye nke paragraf a maka ego anakọtara tupu ụbọchị a dị irè, nke megidere ihe nnabata nke paragraf a kpuchitere. red A gaghị akwụghachi gị ụgwọ.
5) Ọ bụrụ na akwụghị ego kpebiri n'ime etu paragraf a emeghị n'oge, a ga-enwe ike irite uru na usoro dị na paragraf a.
6) Usoro na usoro gbasara mmejuputa paragraf a bụ TEDAŞ kpebisiri ike.
Mgbati oge, ndochi nzuko na ịrụ ọrụ
IHE 2 - (1) Ọhụrụ coronaviruses (Nnọkọ ọnụ-19) maka ihe kpatara eji esite na ntiwa;
a) 10 / 2 / 2005 Enyere ya n'okpuru Iwu Ọrụ Ugbo ikike enyere aka na 5300 na oge ikike, ga-agwụ n’afọ 2020, agbatịwo ya n’otu afọ.
b) 10 / 6 / 1946 Asambodo nke oke osimiri, nke enyere ndi ugbo ahia nke di n’ime oke nke Iwu na Nchedo nke ndu na Ihe aka na Oke ma no nha 4922, ka ana agbatiri rue 11/3/2020, n’etiti 31/7/2020 na 1/8/2020. Onye isi ụgbọ njem na akụrụngwa nyere ikike ịgbatị oge a rue ọnwa atọ site na njedebe.
c) Nnyocha a ga-eme n'ime oke nke Nkeji edemede 4922 nke Iwu Nke 3 1 / 8 / 2020 na-eyigharịrị ruo. E nyere Minister nke Transportgbọ njem na akụrụngwa ịgbatị oge a ruo ọnwa 3.
ç) 4 / 11 / 2004 Dabere na ationskpụrụ Iwu Iwu nke 5253 ụbọchị nke Turkish Civil Code nke dị na ụbọchị 22/11/2001 wee gụọ ọnụ ọgụgụ 4721, a na-eyigharị nzukọ nzukọ ọgbakọ niile rue mgbe 31/7/2020. Onye Minista ime obodo nwere ike ịgbatị oge a ruo ọnwa 3. A na-enwe nzukọ nzukọ izigharị n'ime ụbọchị iri atọ site na ụbọchị mgbaghara. Ọrụ, ike na ibu ọrụ nke arụ ndị dị adị na-aga n'ihu ruo mgbe nzukọ izizi mbụ ga-eme mgbe oge nhapụ gasị gasịrị.
d) 24 / 4 / 1969 A na-ezigharị nzukọ nzukọ nzukọ zuru oke nke Iwu Ndị Ọrụ Uwe nke 1163 ruo 31/7/2020. Onye Minista dị mkpa nwere ike ịgbatị oge a ruo ọnwa 3. A na-enwe nzukọ nzukọ izigharị n'ime ọnwa atọ site na ụbọchị mgbaghara. Ọrụ, ike na ibu ọrụ nke arụ ndị dị adị na-aga n'ihu ruo mgbe nzukọ izizi mbụ ga-eme mgbe oge nhapụ gasị gasịrị.
e) 11 / 6 / 2010 Nzukọ nzukọ nzukọ n'ogo nke Ọrụ Anụmanụ, Ahụike Osisi, Nri, Nri na Nri bu akara 5996 yana Iwu Mmekọ Ọrụ Ugbo nke ọnụ ọgụgụ 29 akara ụbọchị 6/2004/5200 na-eyigharị ruo mgbe 31/7/2020. Onye Mịnịstrị nke Ọrụ Ugbo na Oke Ọhịa nwere ike ịgbatị oge a ruo ọnwa 3. A na-enwe nzukọ nzukọ izigharị n'ime ọnwa atọ site na ụbọchị mgbaghara. Ọrụ, ike na ibu ọrụ nke arụ ndị dị adị na-aga n'ihu ruo mgbe nzukọ izizi mbụ ga-eme mgbe oge nhapụ gasị gasịrị.
f) 18 / 5 / 2004 Nke 5174 dere na Turkey Chambers na Stock Exchanges Union of Chambers na Commodity Exchanges ga-mere dị na edemede 61 nke Iwu na May 2020, Union General Assembly ẹkenịmde na njikọ na afọ ọzọ General Assembly.
g) 18 / 1 / 1984 A na-eme ntuli aka dị ka isiokwu nke 2972 nke Iwu nke 33 ​​na Nhọrọ nke Nchịkwa Obodo na Ndị Ọchịchị Mukhtars na Kọmitii Ndị Okenye na 2020.
h) 28 / 2 / 2008 N'ime oke nke Iwu No. 5746 na Nkwado Nnyocha, Mmepe na Ihe Omume,Ge na ihe R&D rụrụ na etiti arụmọrụGe na ka ewuru n’azu ebe anwughi imewe; N’agbata Iwu zụlite Teknụzụ nke ụbọchị 26/6/2001 ma gụọ ọnụ ọgụgụ 4691, enwere ike ịhapụ oflọ Ọrụ nke ụlọ ọrụ na teknụzụ ka ọ rụọ ọrụ ndị a na-eme n’ime Mpaghara, ruo ọnwa anọ na-amalite site na 11/3/2020. Enwere ike ịgbatị oge a ruo ọnwa 4 site na njedebe nke oflọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ na Nkà na Technologyzụ. Ọ bụrụ na enyere ya, Ministri nke Ahịa na Nkà na ụzụ na-aga n'ihu na-erite uru site na nwepu ego, wezuga ya, nkwado na agbamume n'okpuru Iwu Nke 3 na Iwu Nke 5746, ma ọ bụrụ na a gwara Mịnịstrị nke ụlọ ọrụ na Nkà na ụzụ.
h) 25 / 6 / 2001 Mkpebi ahụ dị na paragraf (a) nke paragraf nke abụọ nke Nkeji 4688 nke Iwu Nke 30 na ngalaba Ọrụ Ọha na mkpokọta nkwekọrịta bụ nke emere na 2020 nke Julaị 15 maka 2020 wee ziga ya na Familylọ Ọrụ nke Ezinaụlọ, Ọrụ na Ọrụ Ndị Ọrụ Ruo na 31 July 2020 kacha ọhụrụ. Mkpebi a ga-eme dị na okirikiri akwụkwọ (b) nke otu paragraf ahụ ka ebido 15 Julaị 2020 ma ebipụta ya na Ọdee akwụkwọ Gazette n'izu mbụ nke Septemba. Ewere Onye isi ala ịgbatị oge ndị a ruo Mee 15, 2021.
i) 18 / 10 / 2012 Oge a kara aka gbasara okwu banyere ikike ikike n’etiti ngalaba ndị na-azụmaahịa na nkwekọrịta ndi ọrụ mkpokọta Iwu nke 6356, nkwekọrịta nkwekọrịta ndị ọrụ, mkpebi nke esemokwu ndị ọrụ, yana ịgbatị ọrụ na mkpọchi a agbatịwo ruo ọnwa atọ site na ụbọchị dị irè nke edemede a. E nyere Onye isi ala ohere ịgbatị oge ọnwa atọ na paragraf a ruo ọnwa atọ site na njedebe.
i) Uzo ahia maka ire ere, ịgbazinye ihe, kwatuo ya, owuwu ala ma obu ala ulo nke ulo a na -akwu ego, ma nwekwaa ezigbo ikike idobe ikike, yana ịgbazinye ya na inye ikike iji ebe di na steeti na mkpocha nke Steti; 31 / 7 / 2020 Enwere ike ime ya na gburugburu elektrọnik site na iji akụrụngwa teknụzụ nke ụlọ ọrụ ndị metụtara na relatedlọ Ọrụ Mpaghara na Urbanization na ndị otu ha jikọtara ọnụ ruo ụbọchị ọrụ. Onye Mịnịstrị gburugburu na Urbanization nwere ike ịgbatị oge a ruo ọnwa 3. Usoro na usoro dị iche iche banyere ọrụ ndị a bụ ndị Ministry of Environment na Urbanization kpebisiri.
IHE 3 - 14 / 9 / 1972 Njem akara ụbọchị 1618 ma gụọ mmadụ XNUMX Ụlọ ọrụ na Njem Ụlọ ọrụ E meziiri nke atọ paragraf nke anọ nke Iwu Union dịka ndị a.
“A na-enye ndị ahịa iwu asambodo azụmaahịa ahụ naanị maka azụmahịa. Asambodo eji arụ ọrụ nyere ikike iji nweta ikike ahụ n'aka ndị ozi gị n'ụlọnga Enwere ike ibufe ya na ụlọ ọrụ iwu ọzọ n'agbanyeghị aha ya na mbufe na-amalite n'ụbọchị ụbọchị ndebanye aha na Ozi. Emi odude ke mbubehe mbufụt emi ekesịnede gị n'ụlọnga aha ma ọ bụ aha nke ga - eduga na ịkpọtụrụ njem ọ bụla n'ime afọ iri elekọta mmadụ na bụghị nyere. Agaghị enye ụlọ ọrụ iwu kwadoro nke na-enyefe akwụkwọ azụmaahịa a ọzọ n'ime afọ atọ. Usoro na usoro gbasara inyefe akwụkwọ a bụ nke Mịnịsta kpebiri. ”
IHE 4 - 4 / 11 / 1981 Agbakwunyela isiokwu ọzọ na-esote Iwu Ego Dị Elu nke 2547 nke ụbọchị.
“AKW ARKWỌ NZỌ 45 - Site na usoro nchịkwa ego nchịkwa nke ngalaba ahụike na usoro ezumike nke mahadum ndị gọọmentị nwere na ọrụ ahụike na nyocha nke ụlọ ọrụ jikọtara ha, yana ndị na-atụgharị isi ego ọrụ nke ụlọ ọrụ ndị na-enye ọrụ ahụike ahụ rectorate, pasent nke mkpuchi ụgwọ dị n'okpuru ndị Ministry nke Akụ na Ego. Enwere ike ibunye akụ site na mmefu ego nke Ministry.
Ndị ọrụ na Ego na Akụ na-ekpebi usoro na ụkpụrụ metụtara paragraf nke mbụ bụ ndị na-ahụ maka njikwa ego na usoro mmefu ego na ọrụ na azụmahịa metụtara mmefu a ga-enyocha ya site n'aka ndị na-enyocha ndị ọrụ nke Akụ nke Akụ na Ego. N'ime nnyocha ahụ, a na-enyocha ya n'ụzọ zuru ezu ma a na-eji ego ndị bufere ya n'ime usoro nke ụkpụrụ a kpebiri na kwekọrọ na nzube ya. "
IHE 5 - 24 / 5 / 1983 Agbakwunyela edemede nwa oge na-esote na Iwu Ọrụ Ọrụ Ọhụụ nke edere 2828 wee gụọ ọnụ.
“AKW ARKWỌ NWA 18 - Ọhụrụ coronaviruses (Nnọkọ ọnụ-19) maka ihe kpatara eji esite na ntiwa;
a) Mgbakwunye nke 7 iji nye aka nlekọta ọrụ na ngalaba nlekọta. nke Nkwupụta ego mbata na ọnọdụ nkwarụ siri ike na paragraf mbụ nke ederede.
b) criteriakpụrụ dị iche iche egosiri na usoro nke mbụ nke edemede ọzọ 10 iji nye aka na-arụ ọrụ site na ịre ọrụ,
bu Achọghị ya ọnwa atọ site na ụbọchị nke mbido ike nke edemede. E nyere Onye isi ala ahụ ịgbatị oge a ruo otu afọ. ”
IHE 6 - 25 / 8 / 1999 N'okwu ikpe ikpeazụ nke paragraf nke abụọ nke ntinye aka nke 4447 nke Iwu mkpuchi Na-enweghị Ọrụ nke edere 23 wee gụọ ọnụ, ahịrịokwu "ewezuga mkpebi ntozu oke" agbakwunyere mgbe ahịrịokwu ahụ "ngwa".
IHE 7 - E tinyegola usoro ihe omume na-esote na Iwu Nke 4447.
“AKW PRKWỌ NSỌ 24 - Ọ bụ ezie na enwere nkwekọrịta ọrụ na nbanye nke edemede a, ndị ọrụ nyere ndị ọrụ ọrụ ụgwọ na-akwụghị ụgwọ n'okpuru oge nwa oge 4857 nke Iwu Nke 10 na ndị na-enweghị ike irite uru nwa oge ọrụ. 15 / 3 / 2020 Ndị ọrụ nke nkwekọrịta ọrụ ha bụ njedebe nke edemede 51 ma enweghị ike irite uru na enweghị ọrụ dị ka usoro ndị ọzọ nke Iwu a si dị, na ọnọdụ ha anaghị enweta ego ezumike nká site na ụlọ ọrụ nchekwa ọ bụla na nke nwa oge nke 4857 nke Iwu ahụ. Ego a na-enye 10 Turkish ego nkwado ugwo ego ma ọ bụrụhaala na ha nọ ma ọ bụ na enweghị ọrụ. Agaghị ewepụ ego ọ bụla site na ego ịkwụ ụgwọ, belụsọ sttụ ụtụ.
N'ọnọdụ nke a kpebisiri ike na onye ọrụ ahụ nke kwụrụ ụgwọ maka nnwere onwe n'efu n'okpuru paragraf nke mbụ yana onye ritere uru na nkwado ego na-enweta n'ọrụ, ọ ga-ekenye onye ọrụ ahụ iche iche maka onye ọrụ ọ bụla were n'ọrụ n'ụzọ a na ọnwa ọ bụla nke ọrụ. iche iche Na ego nke ụgwọ ọnwa kacha nta na-ekpebi site na edemede 4857 nke Iwu nke 39 na ụbọchị omume ahụ, ndị ọrụ nchịkwa na-etinyere ma na-akwụ ụgwọ ego site n'aka onye were ya n'ọrụ yana ụgwọ iwu nke a ga-ahazi site na ụbọchị ịkwụ ụgwọ.
Ndị na-erite uru site na nkwado nkwado ego n'okpuru edemede a abụghị onye mkpuchi mkpuchi ahụike ma ọ bụ onye ọrụ mkpuchi ahụike dị ka Iwu Nke 5510, 60 nke otu Iwu ahụ si kpuchie. na Inc. A na-ahụta ha dị ka ndị amụma mkpuchi ahụike n'ozuzu nke akwụkwọ mpempe akwụkwọ (g) nke paragraf mbụ nke isiokwu ahụ yana ego mkpuchi metụtara ego mkpuchi ahụike ahụ.
Enwekwara ndị Ministry iji chọpụta usoro ịkwụ ụgwọ yana ụkpụrụ metụtara nkwado ego na iwepu obi abụọ ọ bụla nwere ike ibute gbasara itinye edemede a. "
IHE 8 - E tinyegola usoro ihe omume na-esote na Iwu Nke 4447.
“AKW ARKWỌ NWA 25 - Ọhụrụ coronaviruses (Nnọkọ ọnụ-19) N'ihi ihe mmanye maka ngwa ọrụ nwa oge nke ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ mere, a na-akwụ ụgwọ ọrụ oge dị ka nkwupụta nke ndị were n’ọrụ si na-eche na mmezu nke mkpebi. Ọrụ a na-akwụ ndị na-arụrụ ọrụ n ’ụgwọ ọrụ na ụgwọ ezighi ezi ndị a na-akwụ maka ndị were ha n’ọrụ na-anata onye were ya n’ọrụ na mmasị ya na iwu.
IHE 9 - 22 / 5 / 2003 E tinyegola usoro ihe omume na-esote na Iwu Iwu Ọrụ 4857.
“AKW PRKWỌ NSỌ 10 - N’agbanyeghi ma Iwu a kpuchitere ma ọ bụ na ọ kaghị, ọrụ ọ bụla ma ọ bụ nkwekọrịta ọrụ ọ bụla anaghị agbaso iwu nke ụkpụrụ ọma na ezigbo okwukwe na paragraf (II) nke paragraf mbụ nke edemede 25 na iwu ndị ọzọ dị mkpa maka ọnwa atọ site na ụbọchị dị irè nke edemede a. Ewezuga ikpe na ihe ndị ọzọ yiri ya, onye ọrụ ahụ enweghị ike ịkwụsị ya.
Onye were ya n'ọrụ nwere ike ịhapụ onye ọrụ ahụ kpamkpam ma ọ bụ akụkụ ya ụfọdụ na-akwụghị ụgwọ maka ọnwa atọ tupu ụbọchị a edere. Ikike inweta ezumike akwụghị ụgwọ n'okpuru edemede a anaghị enye onye ọrụ ikike ịkwụsị ọrụ nkwekọrịta dabere na ebumnuche ziri ezi.
N’emebi iwu nke edemede a, onye were ya n’ọrụ ma ọ bụ onye nnọchi anya ya bụ onye kwụsịrị ọrụ nkwekọrịta ahụ, a ga-akwụ ya ezigbo ụgwọ ọnwa a na-akwụ onye ọrụ ọ kwụrụ ụgwọ ya.
Anyere Onye isi ala ịgbatị oge ọnwa atọ na paragraf nke mbụ na nke abụọ ruo ọnwa isii. ”
IHE 10 - 10 / 12 / 2003 E tinyegola edemede ọzọ na-esote na Njikwa Ọha na Ọha Ọchịchị nke Mba 5018 ụbọchị.
AKW ADKWỌ AKW 7KWỌ XNUMX - N'ọnọdụ nke ike majeure dị ka ọdachi ndị na-emere onwe ha dịka ala ọma jijiji, ọkụ, idei mmiri na ọrịa ma ọ bụ sistemụ ozi nke oflọ Akụ na Ego na-arụ ọrụ ọ bụla; Uzo eji emeputa, ndekota, bufee, chekwaa ma gosiputa data, ihe omuma na akwukwo bu ndi Ministri na Ego na Ego.
N'okwu banyere mmanye mmanye, a naghị etinye ego mmachi n'ihe metụtara ọmịiko, oge igbu oge na ntaramahụhụ maka ndị na-emetụta ya n'ihi igbu oge nke nwere ike ịre ahịa na usoro ozi nke Akụ nke Akụ na Ego. "
IHE 11 - 21 / 3 / 2007 A gbakwunyela edemede nwa oge na -echeta Iwu Nzuzo nke ụbọchị 5607.
NKWUO NKE 13 - (1) 30 / 9 / 2020 Ngwa ọrụ ahụike na ihe, akụrụngwa nnwale, plasma, ethyl mmanya, nke achịghapụrụ n’okpuru Iwu a ma bụrụkwa ndị metụtara ibuso ọrịa na-efe efe ọgụ. isopropyl mmanya, glycerol, masks, gloves, mkpuchi, mkpuchi akpụkpọ ụkwụ, cologne, disinfectant, ngwaọrụ disinfection, akụkụ iku ume, akụrụngwa nlekọta ahụike, ọgwụ, ọgwụ mgbochi, ihe enyemaka mbụ na ngwaọrụ na akụrụngwa eji eme ihe, ma ọ bụrụ na ọ dịghị mkpa ịchekwa dịka ihe akaebe, ewerela sample zuru ezu. Ọ bụrụ na nke a agaghị ekwe omume, mgbe ịchọpụtachachara ihe dị iche iche, enwere ike ịrịọ ya onye ọka ikpe na ngalaba nyocha ma ọ bụ ụlọ ikpe n'obere ikpe site na nchịkwa nchịkwa ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọha na eze nwere mkpa. Enwere ike itinye akwụkwọ mkpesa megide mkpebi emere na arịrịọ. Ọ bụrụ n ’ekpebie iweghachi ihe ahụ, nke ọka ikpe ma ọ bụ ụlọ ikpe kwadoro, na njedebe nke nyocha ma ọ bụ gbaa akwụkwọ, ego ahụ fọdụrụ mgbe kewara ọrụ ụtụ na ịkwụ ụgwọ site na uru ziri ezi nke ihe ahụ, ọ bụrụ na enwere, kwụrụ onye nwe ya site na ụlọ ọrụ enyere.
(2) Onye isi ala nwere ikike ịgbatị oge ahụ na paragraf nke mbụ ruo ọnwa atọ. ”
IHE 12 - 13 / 1 / 2011 A tinyela ihe edemede na-esote na Usoro Azụmaahịa Turkey nke edepụtara 6102.
“AKW ARKWỌ NSỌ 13 - (1) N'isi ụlọ ọrụ, 30 / 9 / 2020 Ruo ụbọchị ahụ, enwere ike kesaa pasent iri abụọ na ise nke uru a maka afọ, agaghị ekesa uru afọ gara aga na ikike nweere onwe ha, a gaghị enwe ike ị nweta ikike izukọta ọgbakọ maka ikere òkè. Usoro a anaghị emetụta gọọmentị, ndị isi mpaghara pụrụ iche, ọchịchị ime obodo, obodo nta na ụlọ ọrụ iwu ọha na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị pasent iri ise nke isi obodo, ozugbo ma ọ bụ n'ụzọ ndị ọzọ karịa pasent iri ise nke isi obodo ha. Onye isi ala nwere ike ịgbatị ma wedata oge akọwapụtara na paragraf a ọnwa atọ.
(2) Ọ bụrụ na General Assembly kpebiri kesaa nkesa maka afọ agụghị 2019, mana akwụbeghị ndị na-eketa ego ma ọ bụ obere akụkụ, ego a ga-akwụ maka akụkụ karịrị pasent iri abụọ na ise nke uru net maka 2019 ga-ebigharị ruo na njedebe nke oge akọwapụtara na paragraf mbụ.
(3) Ekwenyero n'aka Minista Azụmaahịa iji chọpụta ihe dị iche na usoro na ụkpụrụ gbasara mmejuputa iwu nke ụlọ ọrụ isi obodo nke isiokwu a kpuchitere, site na ịnabata echiche nke oflọ Akụ Akụ na Akụ. ”
IHE 13 - 14 / 1 / 2015 Agbakwunyewo paragraf na-esote na paragraf nke mbụ nke Nkeji edemede 6585 nke Iwu na Regulation of Retail Trade nke edere n’afọ 18 wee gbanwee gbanwee paragraf nke anọ dịka ndị a.
"M) Ndị na-eme ihe megidere paragraf mbụ nke Ihe Ederede Nke 1, site na puku okwu iri puku Turkish gaa na otu narị puku ndị Turkish lụrụ; Maka ndị na-eme ihe megidere paragraf nke abụọ, site na puku okwu puku Turkish ise ga-eru puku narị ise nke Turkish, ”
"(4) Ikike itinye ego dị n'iwu mpempe akwụkwọ (i) nke paragraf mbụ nke isiokwu a bụ Kọmitii Na-ahụ Maka Nlekọta Azụ Na-ahụ Maka Ọha na thelọ Ọrụ Maka Ọrụ na-etinye ego ndị ọzọ akọwapụtara na edemede a. Enwere ike ibuga ikike nke itinye ego na nke ndị ọrụ na Ngalaba nke Ngalaba. "
IHE 14 - E tinyego ihe ndị ọzọ na-esonụ na Iwu Nke 6585.
“Exorbitant price mmụba, Ndepụta Ngwaahịa na arụghị ọrụ ọnụahịa Board
AKW ADKWỌ AKW 1KWỌ --B manufacturersTA 1 - (XNUMX) Ọ nweghị ndị na-abawanye ọnụ ahịa ọnụahịa dị mma nke ndị na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa ga-enwe.
(2) Enweghị ọrụ ọ bụla ndị nrụpụta, ndị na-eweta ngwaahịa na azụmaahịa na-ere ahịa ga-eme iji gbochie ndị ahịa ịbanye na ngwongwo na ihe omume nke na-akpata ọgba aghara n'ahịa, na-akpaghasị echiche ahịa na asọmpi n'efu.
(3) E guzobere Kọmitii Ntụle Ọnụahịa efu ka ọ wee mee ndokwa maka ọnụahịa dị oke elu na njikwa ngwaahịa nke ndị na-emepụta, ndị na-ebubata ya na azụmahịa azụmaahịa, iji wee nweta iwu nchịkwa ma were ụdị usoro niile site na ịme nyocha na inyocha mgbe ọ dị mkpa. Nke Board ahu, bu onye isi ndi ahia n’ime ha;
a) Onye njikwa izugbe nke Nchedo ahịa na onyunyo ahịa,
b) Onye njikwa ndi okacha amara, Artisans na ndi ozo,
c) Otu onye isi ndi Omazi ikpe ekpeputara, ndi Ministri na Ego na Ego, Mịnịsta nke ọrụ na teknụzụ na oflọ Ọrụ Ihe Ọhịa na Ọhịa.
Onye enyemaka osote onye isi ahia nke ahia ebe obibi,
d) Turkey Union of Chambers na Commodity Exchanges nke Turkey ahịa na ndị ọrụ nkà nke otu onye so họpụtara ndị Association,
e) Otu onye na-anọchite anya ndị na-emepụta ihe na ndị na-azụ ahịa na mpaghara azụmaahịa,
ibu Ọ mejupụtara ndị òtù iri na atọ.
(4) Kọmitii mgbe oku nke Onye isi ala kwuru, ọ bụrụ na ọ dị mkpa; Ọ dịkarịa ala mmadụ asaa na-emekọrịta ihe, gụnyere Onye isi oche, ma na -ekpebi ọtụtụ ndị na-aga nzukọ ahụ mkpebi. N'ihe banyere ntuli aka ndị ha nhata, ihe ka ọtụtụ n'ime ndị otu nke Onye isi oche ịtụ vootu na-ewere ka ọ bụ ọtụtụ. Ministri mejuputara mkpebi nke Board.
(5) Ọrụ nzuzo nke Board a na-arụ site n’aka ndị isi na-ahụ maka azụmaahịa n’ime.
(6) Usoro, ọrụ, ụkpụrụ ịrụ ọrụ na usoro nke Board, ọrụ nzuzo na ndị ọzọ metụtara Board ahụ bụ ndị ụkpụrụ ahụ kpebiri. ”
IHE 15 - 19 / 8 / 2016 Turkey Nke 6741 dere na Asset Management Fund nke Iwu ịmegharị ụfọdụ Iwu Establishment of Joint Stock Company 6 nke A gbanwere okwu a bụ "June" na ahịrịokwu ikpeazụ nke paragraf nke abụọ nke edemede ka ọ bụrụ "Ọgọst".
IHE 16 - A tinyela ahịrịokwu ndị a na paragraf nke ise nke edemede 6741 nke Iwu nke 8, mgbe ahịrịokwu mbụ gasịrị.
"Turkey Àgwà Fund, na Company si sub-ego na ụlọ ọrụ ahụ, o guzobere Company na ụlọ ọrụ ndị ọzọ nke ga-ekwe ka akara aka na nke atọ ma ọ bụ naanị na usoro n'akụkụ nke usoro, ha kpọmkwem oke n'akụ, ndị mmekọ, na-ụlọ ọrụ na-bụrụhaala na-achịkwa ya enyemaka na-ejedebeghị site ndị a azụmahịa Iwu 6362 site na 23 ruo 27 nke A gaghị etinye iwu ndị ọzọ na usoro iwu metụtara ya, enwere ike itinye n'ọrụ a. 13 / 1 / 2011 6102 nke Koodu Azụmaahịa Turkish dere ụbọchị 202 nke Ukwu; Turkey Àgwà Fund, soplaya sub-ego na ụlọ ọrụ ndị ọzọ ahụ guzosie ike site na Company, ọnụ na singly ma ọ bụ ndị ọzọ ozugbo ma ọ bụ n'ụzọ ka ha na ụlọ ọrụ ndị ikwado mastery na ihu ọma nke na n'akụkụ nke ndị a azụmahịa na-ejedebeghị na azụmahịa metụtara ndị ọchịchị nke owuwu, ha kpọmkwem ma ọ bụ anọ adịghị emetụta ndị nwe ala, ndị mmekọ na ndị enyemaka. ”
IHE 17 - (1) Iwu a;
a) 2 nke paragraf (ç), (d), (e) na (ğ) nke mbụ paragraf nke 10 / 3 / 2020 Dị irè site na ụbọchị mbipụta,
b) Nkeji edemede 8 29 / 2 / 2020 N’ụbọchị e bipụtara ya, ka etinyere ya site na
c) Ihe ndi ozo n’ụbọchị ewepụtara,
IHE 18 - (1) Onye isi ala na-eme ihe omume nke Iwu a.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 9 August 1909 A hapụrụ Iwu Ezumike-i Equality. (Strike Iwu)
Taa na History: A tọhapụrụ 9 August 1909 Holiday-i Equality Law
Taa na akụkọ ihe mere eme: 9 August 1909 Holiday-i tọhapụrụ Iwu Equality ...
İzmir BB Rail Sistemula Usoro 2 Göztepe - Polygon - Fahrettin Altay…
TS EN 197-1 CEM I 42,5 Cement na Çimento
Ntụle Obi Ụtọ: Ekele maka ịzụta 500 ton akpa Spinning Sand
E tinyekwara okporo ígwè n'ime iwu
TCDD ego mmemme ego ụgwọ ọrụ
Ọzụzụ ngwa ngwa nke Antalya na akpa Iwu
Ibu Istanbul akpa ụgwọ kwadoro nzuko omeiwu
Lụọ megide Nje Virus na Asọ
Ijikwa Coronavirus dị Irè na Ebe Ọrụ
Ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ na-etinye akwụkwọ maka obere ọrụ maka obere oge karịrị nde 3
Na-aluso Achi na Ankara
Ihe omume ụgbọ ala na-arụ ọrụ na-adị na ya Akụkọ ndị a na-atụ anya ya maka akwụkwọ ndị e bipụtara - 2 obi ọjọọ